Xasan Sheekh oo ka qeybgalaya shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Xasan Sheekh oo ka qeybgalaya shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka
Xasan Sheekh oo ka qeybgalaya shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeybgalaya shir Mareykanka uga furmaya madaxda wadamadda Afrika iyo Mareykanka oo uu marti gelinayo madaxweyne Barack Obama.
Safarka madaxweynaha waxaa ku wehlinaya wasiirka arrimaha debadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo xubno kale oo lagu wado inay ka qeybgalaan shir dhexmaraya hogaamiyeyaasha Afrika iyo madaxweyne Obama, kaasi oo looga arrinsanayo mashaakilaadka heysta qaaradda Afrika.
Shirkaasi ayaa sanadkaan diiradda lagu saarayaa inta badan sidii xoogga loo saari lahaa horumarka Afrika, loogana hortagi lahaa dhibaatooyinka ku soo laablaabta qaaradda sida colaaddaha, cuno yaridda iyo cudurka halista ah ee AIDS-ka.
Dawladda Soomaaliya ayaa shirkaasi uu ahmiyad gaar ah u leeyahay isla markaana la tagi doonta qorshayaal ay kala hadli doonto xukuumadda Washington. Dhanka kalena waxay wefdiga madaxweynuhu kulamo la yeelan doonaan hogaamiyeyaasha kale ee ka socda qaarad weynta Afrika iyo madaxda wadankaasi Mareykanka.
Dhawaan ayey ahayd markii madaxweynaha Markeykanka uu waraaqihiisa aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona magaaladda Washington danjire Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’ake.
Previous articleHaween lagu laayey Muqdisho iyo hub la qabtay
Next articleMuqdisho oo dadka la baarayo iyo walaaca waaridiinta